Dhagaxyada | February 2020
Ugu Weyn Ee Dhagaxyada
Sidee loo dhajiyaa foornada xayawaanka ee aagga banaankeeda
Qalabaynta jidadka xagaaga xagaaga ama meel u dhow aqal wadan, qof kastaa wuxuu rabaa inuu ahaado mid aan shaqeynin, laakiin sidoo kale wuxuu ku habboon yahay naqshadda guud ee muuqaalka. Helitaanka foornada saxda ah mar walba ma shaqeyso. Xaaladaha noocaas ah, dad badan ayaa go'aansada inay abuuraan xabado xabbo leh iyagoo gacmahooda ku haysta guriga.
Caymisyada badan waxaad arki kartaa wadada bannaan. Dhammaystiridda waddooyinka waddanka leh xargaha boodboodka ayaa ah habab aad u fiican oo caan ah oo loo diyaariyo dhulka u dhow guriga, sidaas awgeed su'aasha ah "Sidee baan u dhejin karnaa gacmahayga?" waxay dhacdaa inta badan. Sida loo doorto foosto waddanka Marka aad dooranayso nooc ka mid ah waddada waddanka (laga bilaabo xargaha duubista) waxaad u baahan tahay inaad fiiriso alaabta wax soo saarista.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dhagaxyada 2020